तीन पटक मुम्बईसँग हारेको दिल्लीले जित्ला त आईपीएलको फाइनल ?? - कान्तिखबर – सम्पुर्ण समाचार हामीसँग
९ माघ २०७७, शुक्रबार , ०३:०८
तीन पटक मुम्बईसँग हारेको दिल्लीले जित्ला त आईपीएलको फाइनल ??
२०७७ कार्तिक २५, मंगलवार १७:३० गते
काठमाडौं : यूएईमा जारी १३ औँ सिजनको आईपीएलको फाइनल आज हुँदैछ । यो पटक उपाधिका लागि दिल्ली क्यापिटल्स र मुम्बई इण्डियन्स खेल्न लागेका हुन् । यी दुईबीचको खेल नेपाली समयअनुसार साँझ ७ः४५ बजेदेखि दुबईमा सुरु हुनेछ ।
आईपीएल २०२० मा दुबै टिमले राम्रो गर्दै गर्दै फाइनलसम्मको यात्रा गरेका हुन् । मुम्बईले दिल्लीलाई हराउँदै फाइनलमा स्थान बनाएको हो । दिल्लीले आइतबार राति सनराइजर्स हैदराबादलाई हराउँदै पहिलो पटक फाइनलको टिकट काट्न सफल भयो ।
तुलनात्मक रूपमा जारी सिजनमा दिल्लीभन्दा मुम्बई बलियो देखिएको छ । उसले दिल्लीलाई पहिलो क्वालिफायर र लिग चरणका दुबै खेलमा पराजित गरेको थियो ।
मुम्बईका इशान किशन, क्विन्टन डिकक, हार्दिक पाण्ड्या, सूर्यकुमार यादव राम्रो लयमा छन् । उसका जसप्रीत बुमराह र ट्रेन्ट बोल्टले लगातार घातक बलिङ गरिरहेका छन् ।
दिल्लीले सुरुवातका म्याचमा राम्रो सुरुवात गरे पनि पछिल्लो खेलमा खराब लय समातेको थियो । यद्यपि क्वालिफायर-२ मा हैदराबादविरुद्ध भने दिल्लीले फेरि लय देखाएको छ ।
हैदराबादविरुद्ध शिखर धवन, मार्कस स्टोइनिस, शिमरोन हेटमायर, कागिसो रबाडाले शानदार प्रदर्शन गरेका थिए । फाइनलमा पनि त्यही लय कायमै राखे मुम्बई र दिल्लीको म्याच रोमाञ्चक हुने अनुमान गरिएको छ ।
३ सिजनसम्म आइपुग्दा दिल्लीले उपाधि जित्न सकेको छैन । तर, मुम्बईले भने चार पटक आईपीएल ट्रफी हात पारिसकेको छ । मुम्बई गत सिजनको विजेता टिम पनि हो ।
मुम्बईको सम्भावित प्लेइङ-११ : क्विन्टन डिकक, रोहित शर्मा (कप्तान), इशान किशन, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पाण्ड्या, किरण पोलार्ड, कृणाल पांड्या, राहुल चहर, नाथनकुल्टर नाइल, जेम्स प्याटिन्सन/ट्रेन्ट बोल्ट र जसप्रीत बुमराह ।
दिल्लीको सम्भावित प्लेइङ- ११ : शिखर धवन, मार्कस स्टोइनिस, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर (कप्तान), ऋषभ पन्त, अक्क्षर पटेल, हर्षल पटेल/प्रवीण दुबे, शिमरोन हेटमायर, कागिसो रबाडा, रविचन्द्रन अश्विन र एनरिच नोर्टजे।
खेलकुद खबर प्रदेश १
कर्णालीलाई सिद्धान्तको अर्धशतकमा २१६ रनको लक्ष्य
२०७७ माघ ९, शुक्रबार १३:३२ गते कान्तिखबर
खेलकुद खबर प्रदेश ३
२०७७ माघ ८, बिहीबार १३:५५ गते कान्तिखबर
खेलकुद खबर ताजा प्रदेश ३
बागमती प्रदेशको प्रधानमन्त्री कपमा लगातार दाेस्राे जित
२०७७ माघ ५, सोमबार १६:२८ गते कान्तिखबर
अमेरिकी राजदूतले वाइडनको प्राथमिकताबारे प्रधानमन्त्रीओलीलाई गराए जानकारी
अन्तरराष्ट्रिय ताजा प्रदेश ३ राजनिति
२०७७ माघ ९, शुक्रबार १४:५६ गते कान्तिखबर